Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegay in xal laga gaarey Arrintii Buulo Burde - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegay in xal laga gaarey Arrintii Buulo Burde
Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegay in xal laga gaarey Arrintii Buulo Burde
ayaa sheegay in lagu guuleystay xal u helidda caqabadihii hortaagnaa dhismaha golaha deegaanka ee Degmada Buulo-Burde.
Wasiir ku xigeeka oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Dr.Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hogaaminaayey o maalmahaan ku sugnaa Degmada Buulo Burde, ay kulammo gaar gaar ah la yeesheen hogaamiyaasha qeybaha bulshada,isla markaana la isku afgartay sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi.
Axmed Bariise Xeydar,Wasiir ku xigeenka waxa uu hoosta ka xariiqay in la xalliyay tabashooyin ku aadaanaa dhismaha golaha deegaanka,isagoo ka codsaday qeybaha bulshada in ay garab ku siiyaan maamul u sameynta degmadaasi si ay helaan adeegyada lagama maarmaanka u ah horumarkooda.
Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Axmed Bariise Xeydar ayaa sheegay in dhismaha degmada Buulo Burde oo maraya meel wanaagsan ka dib loo gudbi doono maamul u sameynta degmooyinka Baladweyne iyo Jowhar.
Previous articleShirkadda DP World oo ka guuleysatay Jabuuti
Next articleWararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Tirada dadka ka barakacay fatahaadaha Wabiga Shabeelle oo la shaaciyay